Zvakaita Dominican Republic | Bhuku Regore ra2015
Nyika Chitsuwa cheHispaniola chine nyika mbiri. Zvikamu zviviri muzvitatu iDominican Republic uye chikamu chimwe chete iHaiti. Nyika yacho ine masango akanaka ane miti mirefu, makomo akareba, machakwi ane miti, uye magwenga. Nzvimbo yakakwirira kupfuura dzose muDominican Republic, igomo rinonzi Pico Duarte, rakakwirira nemamita 3 175 kubva pamusoro pegungwa. Nzvimbo zhinji dziri pamahombekombe dzine jecha jena uye dzakanaka zvikuru. Nechemukati menyika yacho mune nzvimbo dziri pakati pemakomo dzine ivhu rakaorera dzakadai seCibao Valley.
Vanhu Vakawanda vevagari vemo vane madzitateguru akabva kuEurope nekuAfrica vairoorana. Mune mamwe marudzi akasiyana-siyana ane vanhu vashoma; uye vekuHaiti ndivo vakati wandei.
Mutauro Mutauro wechiSpanish ndiwo unonyanya kushandiswa.
Hama nehanzvadzi dziri kufara pamwe chete
Zvinovararamisa Zvicherwa, shuga, kofi, uye fodya ndizvo zvinonyanya kuvawanisa mari. Munguva pfupi yapfuura upfumi hwenyika yacho hwakakwirira nemhaka yekushanyirwa kwairi kuitwa uye kugadzira kwairi kuita zvinhu.
Mamiriro Ekunze Kunopisa uye kunonaya zviri pakati nepakati, zvekuti kunze kunenge kuchipisa madhigirii anenge 25. Kumakomo ari kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kunonaya mvura yakawanda uyewo kune dzimwe nzvimbo kunonaya mvura shoma. Dzimwe nguva madutu anomboitika pachitsuwa ichi.
Tsika Nemagariro Mupunga, bhinzi, uye miriwo ndizvo zvinonyanya kudyiwa ikoko. Vanhu vemo vanofarirawo kudya zvemugungwa, michero, mhiripiri, uye maplantains (mabhanana akafurayiwa). Zvimwe zveizvi zvinoshandiswa pakubika chikafu chinofarirwa zvikuru chinonzi La Bandera Dominicana (mureza weDominican Republic). Vagari vepachitsuwa ichi vanoda chaizvo mutambo webaseball, mimhanzi, uye kutamba, kunyanya dhanzi remhando yemerengue. Gitare rinozivikanwa chaizvo sezvinongoitwawo ngoma, nyere, uye marimba.
VAPARIDZI MUNA 2014
VAKAPINDA CHIRANGARIDZO MUNA 2014